Ogologo oge ole ka ọnya na ọzịza na-adịru? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Mbelata ọzịza na ọnya - olee otu ị si edozi
Mbelata ọzịza na ọnya - olee otu ị si edozi
Ogologo oge ole ka ọnya na ọzịza na-adịru?
Ozugbo ị bụọnya, ị ga-enwe akara ngosi ahụ na-acha oji na-acha anụnụ anụnụ na anụ ahụ gị ruo izu abụọ. Naọnya kwesịrịgbanwee agba ka ọ na-agwọ. I nwekwara ike inwe ụfọdụ ihe mgbu naọzịza. Ọ ga-afụ ụfụ kachasị na ụbọchị ole na ole mbụ mgbe ọnyá gị gasịrị.
Adị m onye nzuzu na ọnya na-adịru izu. (Igwe ọkụ na-acha ọkụ) Kedu ihe m ga - eme iji wee pụọ ma ọ bụ gbochie ya? (Ọbịa akụ) Achọrọ m ajụjụ ahụ. Yabụ kedu ihe na - arụ ọrụ iji kpochapụ ọnya ma gbochie ya? .
inupụ obi ike
Na Dọkịta B, ama m na ị bụ ọkachamara n’ahụ. Ajuju ajuju m nwere, o bu eziokwu na, dika n’ederede a, umunwanyi na-ata aru kari ndi mmadu? N'ezie, ọ bụ eziokwu na ọ bụ n'ihi na ụmụ nwanyị na-enwekarị akụkụ ụfọdụ nwere ike ịmerụ ahụ, dịka ogwe aka dị elu, akwara anyị, apata ụkwụ anyị. Akpukpo aru anyi pere aka ebe ahu.
Anyị nwere obere abụba subcutaneous yabụ abụba na arịa ọbara dị na mpaghara ndị a. Nye n’ime anyị na-enweghị nke ahụ? Agara m itinye akwa tank mara mma ma wee nweta ọnya jọgburu onwe ya na ogwe aka m elu ma ị nweghị ike. Ma nke ahụ bụ eziokwu; Nke ahụ bụ n'ezie nsogbu.
A na-ahụkarị nke ọma mgbe akpụkpọ gị dị mfe. Fọdụ ndị na-ejikarị mkpụrụ ndụ ihe nketa eme ihe nanị n'ihi na ọ na-eme n'ezinụlọ. Mana anyị nwere nnukwu eserese na-egosi gị ihe na - eme na akpụkpọ gị mgbe ị kụrụ ihe.
Nke a bụ ihe na - eme mgbe ọnya na - emerụ gị ahụ. Mgbe ị na-eleba anya n'ime akpụkpọ ahụ, ọ na-egbutu arịa ọbara, na-ahapụ mkpụrụ ndụ ọbara uhie n'ime akwa ahụ dị n'okpuru anụ ahụ, na-eme ka ọ gbanwee. Anyi na eche ka icha mgbe ogwu ojoo di.
Yabụ maka gị na ajụjụ gị enwere ọtụtụ ihe ị ga - eme. Nke mbụ bụ na a na-ajụkarị anyị gbasara arnica. Ya mere, arnica bụ ihe enwere ike iwere ya na ụdị pellet, ebe ị na-ewere ya tupu usoro.
Yabụ ọ bụrụ na ịmara na ọ dị mkpa ka ịwa ahụ ma ọ bụ mee ihe nwere ike imebi gị, dị ka mgbatị siri ike, mgbatị siri ike, ụdị ihe ahụ. Echere m na ọ bụ nnukwu echiche ime nke a n'abalị tupu ịmalite pellets na amaghị m ma ọ bụrụ na ị ga-akwado ya Echere m na onye ọ bụla na-eme. Echetara m oge mbụ m nụrụ banyere Arnicawas na 80s.
Nwanyị m hapụrụ ihu nwere ọtụtụ ọnya, dịka piom. Ahụrụ m ya ka ụbọchị abụọ gachara wee sị, chaị, Ahụbeghị m ihe ị mere? Ọ na-asị: 'Arnica;' Anụtụbeghị m nke ahụ. Eeh.
Ọ bụghị ya na-akpa ọchị mgbe ndị ọrịa na-agwa gị gbasara ihe. Ee kpamkpam. M pụtara 20, afọ iri atọ ka nke ahụ gasịrị, onye ọ bụla na-enweta arnica.
Ee, ị nwere ike iburu pelleeti otu ụbọchị tupu wee ruo ụbọchị atọ mgbe emechara usoro ahụ, nke bụ usoro mgbochi dị mma. Echere m na gel arnica na-enye aka nke ukwuu mgbe emechara usoro. Mgbe ahụ, ọ ga-enwerịrị ụfọdụ nwechapụ uru.
Nke a dị ezigbo mma. Nke a bụ n'ezie bromelain, ọ na-abịakwa na osisi painiapulu. Ma nke a bụ nnukwu mgbochi mkpali.
songs banyere anyịnya igwe
Nwere ike ịzụta ya dị ka mgbakwunye. Mgbe m gwara ndị ọrịa m ka ha were ya, ọ bụ 250 mg ugboro atọ n'ụbọchị maka ụbọchị atọ mgbe emechara ya. Greatzọ dị ukwuu iji gbasaa mbufụt ma belata ọnya, pụọ ngwa ngwa.
Mana otu ihe nwere ike ịba uru na onye na-ele ihe a bụ izere ihe ndị na-eme ka ọbara dị. N'ihi na ọ bụrụ na ị dịkarịrị ike nchihịa ma were ọtụtụ ibuprofenor aspirin ma ọ bụ naproxen dị ka mmanụ azụ na nlekọta vitamin enwere ihe zoro ezo nke anyị niile nwere mgbe ụfọdụ na nri anyị, na anyị anaghị achọpụta na ọbara anyị na-ebelata na anyị na-emerụ ahụ. a bit mfe Anyị bi ugbu a na a oge ị na-aga online na ihe niile na-akpọsa, na ihe niile nwere aghụghọ, nri? ndị na-anaghị arụ ọrụ. Yabụ ọrụ ndị a.
Ee, ihe ndị a bụ ihe na-arụ ọrụ. (onye ọ bụla na-ekwu okwu n’otu oge) Ndị a bụ ọkacha mmasị m nke enwere ike ịchọta ha na ịntanetị na nke ahụ anaghị arụ ọrụ. Oh nwa nwoke.
Ghichaa ọnụ. Yabụ, ịsacha ọnụ bụ nke anyị hụrụ n’ebe ahụ. Nke ahụ anaghị eme ihe ọ bụla.
Yabụ kpochapụ ya na ebe nchekwa gị. Nke ozo bu banana banana. Maka na ndị mmadụ na-ekwukarị gbasara ya. okwesighi inwe mmetụta.
Ya mere, ị maara, n'ezie ounce nke mgbochi kwesịrị paụnd nke ọgwụgwọ. Mana ka anyị kwuo na ị nwere nnukwu mmemme ma ị nwere mmerụ ahụ jọgburu onwe ya, ma ọ bụ ọbụlagodi lasers, dịka VBeam tube laser, enwere ike iji wee gbasaa ọnya ahụ ngwa ngwa. Na mbido, mgbe mbụ ị rutere onwe gị, mgbe ị nwere obere oge itinye ice n'elu ya. (Sonia) Kpomkpom ọbara.
Ọ bụrụ na ịnwere ike idobe nke ahụ na akpụrụ mmiri obere oge, ọnya ahụ nwere ike ọ gaghị adị njọ. Kpamkpam ee. Ọ dị mma.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka ekpenta hematoma iji gbadaa?
Nke nta nke nta ọbara n'imehematomana-etinye obi gị dum n’ime ahụ. Naọzịzana ihe mgbu nkehematomagapụọ. Nke ana-ewesite na izu 1 ruo 4, dabere na nha nkehematoma.
Ice ọ na-enyere aka ichihịa mgbe elekere 48 gasịrị?
Tinye mkpakọ oyi maka 24 nke mbụ48 awa mgbemmerụ ahụ. Mee ọsọ ọsọ ịakpụrụ, ka ị na-belata mmechi. Zere ịhịa aka naọnyama ọ bụ itinye okpomọkụ n'ihi na ọ nwere ike ime kaọnyaibu.Mgbe awa 48 gachara, a na-ekpo ọkụ mpikota onu nwere ike ijiEnyemakaagbajiọnyaiche ma gbaa ume mkpofu lymphatic.
Sarah Tonks Abụ m onye mara mma na London, ị maara ozi ịntanetị ole m na-enweta kwa izu site n'aka ndị ọrịa a na-agbanye ihe dị ka botox ma ọ bụ ihe nzacha ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ ma ha bụ mkpụrụ akụ n'ihi na ha nwere Abruiseyah n'ezie ee ee anyị mgbe niile nwee Ntụrụndụ ndị a, ị nwere ike ọnyá, enwere ihe egwu na nke a nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị nyagide agịga n'ihu gị, ka emechara, ị maghị ebe ọbara ọbara niile ma ọ bụ ụmụntakịrị nọ, yabụ enwere ihe ize ndụ nke ị nwere otu Inweta ọnya needkwesịrị ịkwadebe maka ọdachi a, yabụ gịnị ka anyị ga-eme ma ọ bụrụ na mmadụ ọnya ma ị hụ ya ka ọ na-abịa, dị ka a ga - asị na ị mere ọgwụgwọ ahụ, hụ ya ka ọ na - akpụ n'okpuru akpụkpọ ahụ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ na-egosi ọbụna dị ka ma eleghị anya abụọ? ma ọ bụ ụbọchị atọ mgbe e mesịrị enwere olileanya maka ndị a? Akpa, m ga-asị na ụjọ atụla n'ihi na ọ bụ ihe dị mma iji ihe aneji onwe gị na apata ụkwụ.
Noble, couldnwekwara ike ọnya, ya atụkwala gị n'anya ma ọ bụrụ na e nwere ọnya mgbe a gwọchara gị, emekwala ihe ahụ mejọrọ, ị maara, mgbe m nwere nke a na-afọ atọ gara aga? Enwela ọnya n'ihi na ị maara ihe anatomi bụ, ị maghị ebe nke ahụ na nke ahụ bụ, nwee obi ụtọ na oge ikpeazụ ha mesoro gị, ma eleghị anya, ị nwere nsogbu n'oge a n'ihi ya ọ bụchaghị ihe ngosi nke ikike nke onye na-agba ogwu ahụ, ma ọ bụ na ọ bụghị. O doro anya na ọnya na-ada mgbe ị dị ka onye na-egbu anụ si Blackwall na ha dị ka ị maara otu esi egbutu onwe gị ma mee ka ị mara na ị na-eme ya site na okike, ee, enwere ike ị ga-enweta ọnya na afụ ụfụ ma emechaa mana ị mara mgbe ị? Ọ bụ mmadụ na-agbara ha ọgwụ, ị ga-ahụ na ha kpachapụrụ anya. Ha maara na ha na-eji ntụtụ ziri ezi eme ihe, ị makwaara na ha na-akwanyere akwa ahụ ugwu, mgbe ahụ ị ga - enweta ọnya mgbe ahụ, enwere m nwute mana ọ dị njọ, ọ bụ naanị otu n'ime ihe ndị a maka oge ole ọnya na - adịru? Ọfọn, ọ dabere na gị, yabụ dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị dị mma ma dị mma ma ị dị obere, nke bụ ihe dịka ụbọchị 10, ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị mkpa na ị ga-ahụ otu esi agabiga usoro ahụ ọ na - enweta gbara ọchịchịrị dị ka agba odo odo, ikekwe dịka agba odo na-acha odo odo na mgbe ahụ ị ga-ahụ ka ọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-acha odo odo ma jiri nwayọọ nwayọọ na-ada, yabụ kedu ihe ị ga-eme iji nwalee odo odo-acha odo odo-odo odo iji mee ngwa ngwa Aga m agagharị gị site na ọkacha mmasị m ihe ị ga-eme n'ụlọ mgbe e mesịrị, yabụ mbụ? nke dị n’elu bụ arnica ochie vs bromelain arụmụka amaara m na ọtụtụ mmadụ dị ka arnica a bụ m karịa nke bromelain girl, ihe kpatara ya bụ n’ihi na enwere ọtụtụ ihe akaebe banyere ya.
N'ime nnyocha nyocha ha mere n'oge na-adịbeghị anya ha chọpụtara na ise n'ime asaa ọmụmụ ihe ọmụmụ ahụ nwere mmetụta dị mma nke bromelain na 4 n'ime 13 hụrụ mmetụta dị mma maka arnikaso ọnụọgụ ka mma maka bromelain nke site n'ụzọ abụghị isiokwu, yabụ nke ahụ bụ ihe Achọrọ m iji ya bụ bromelain larịị ka elu, ọ bụ enzyme painiapulu, ọ dịkwa mma maka iwelata ume. Ọ bụrụ n ’ọ na-adị gị ka ọ na-afụ gị ụfụ mgbe ị gwọchara gị, chee echiche ọzọ banyere pịpịa gị abụọ ma ọ bụ abụọ. Malite constricting bromelain, ọ gaghị emerụ gị ahụ ma were otu n'ime ugboro atọ a ụbọchị bụ ọgwụgwọ, ọ bụrụ na ịchọrọ iwere ya n'akụkụ arnica wee bụrụ onye ọbịa m n'ihu m chere na ọ bụ ụda olu na-adịghị mma na Ihe mere m ji enwe mmasị na nke a bụ na ọ nwere arnica na ntakịrị aloe vera na ya, kamakwa ụfọdụ hexadiene dị jụụ nke bụ antiseptik ọ dị mma nke ukwuu ma ọ bụrụ na ịmara mgbe ị nwetara ọgwụgwọ na ị ga-ịhịa aka ntakịrị, naanị ụdị nke ị maara na a na-etinye ngwaahịa ahụ n'ọnọdụ ya, m na-ejikarị ya eme ya, ọ bụghị mgbe niile ka m na-eji ya eme ya mana ee nke ahụ bụ ihe ụlọ ọgwụ m Arch dabere na ị nwere ike iji ya n'ụlọ, mana mgbe ị lara n'ụlọ eleghị anya ị chọghị iji ihe ọ bụla nwere corehexa-diene, ọ bụ nke a ma ọ bụ DermX na ude vitamin K ahụ ka ọ dị ebe ahụ Enweghị ọtụtụ ihe akaebe nke vitamin K cream, mana enwere ọmụmụ na-ele ndị nwere ọgwụgwọ laser na ma ọ bụrụ na ha anaghị eji vitamin K eme ihe ọsọ ọsọ ọnya mgbe ọgwụgwọ laser gasịrị, azịza ya bụ ee, oge ụfọdụ enwere m ike ịme nke a ọzọ.
M ga-eji nke a n'ụlọ ọgwụ mana nke a nwere ike ịka mma ka ị jiri n'ụlọ wee bụrụ ibe dị ọnụ ala ị nwere ike ịzụta na ntanetị ị ga-ahụ ọnya na-etolite, naanị otu na-aga kọlọtọ na-enweghị MD Ude ma tee ya na, n'ihi na glycerin dị na ngwaahịa a na-emechi okpu ntakịrị n'ihi na ọ na-akpata obere ọzịza, ị ga-echere ruo mgbe ọgwụgwọ gwụchara tupu iji ya, ma ọ bụghị na ị gaghị ahụ n'ezie na ị maara ihe ị na-eme na ọ bụ ọzịza a na-akpata ude, agbanyeghị onye maara ihe ọ bụ? Mana ọ na - eme ka ọbara kwụsị na mpaghara ahụ, nke na - ebelata mmerụ ahụ, yabụ ị nwere ike iji ya ma ọ bụrụ na ị nwere ọnya ma ọ bụrụ na ịchọrọ, mana ị ga - adị mma ma ọ bụrụ na ị nwetara ya Mee n'ụlọ, jiri bromelain ọnụ na na vitamin K ude m na-eche na ị maara n'ezie na ị nwere ụdị okpukpu abụọ nke ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ onye pụrụ iche na isiokwu ndị a yiri, ị takingụ otu mkpụrụ ọgwụ ezughi gị, ezughị, ị ga-ewere ya ozo ozo Gini ka imere? Ọ dị mma mgbe ahụ ndị enyi m ị nwere laser ma ọ bụ IPL, yabụ mgbe ụfọdụ mgbe mmadụ nwere ihe omume ma ọ dịka okwu dị oke mkpa na anyị ga-akpọghachi ha n'ụlọọgwụ ma mee ka ha laa azụ ọfụma ma ọ bụrụ na ọ bụ odo odo ma ọ bụ oji ojii ka anyị merụrụ ahụ. Ọgwụgwụ yag laser, ọ bụrụ na ọ dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ edo edo IPL na-arụ ọrụ nke ọma maka nke ahụ, mana ị nwekwara ike iji laser KTP na laser drọ pulsed - ọ na - eme na ha bụ ndị na - eme anyị nwere n’ụlọọgwụ, na ahụmịhe m , ọ bụrụ na ị na-emeso mgbe ọnya ahụ dị na odo odo ma ọ bụ oji ojii ị nwere ike belata oge ịgwọ ọrịa na ọkara ihe dị ka ọkara ọkara ejiri m n'aka na ihe ndị ọzọ gbasara ihe dị ebe ahụ maka mmerụ ahụ m na-ekwutụbeghị. Naanị m na-ekwu maka ngwaahịa m na-eji n'ụlọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ị nwere ndụmọdụ ma ọ bụ aghụghọ dị ịtụnanya ịkọcha aka gị, biko mee ka m mara na anaghị m ekwu maka ndị mmadụ na-eji galik ma ọ bụ vitamin E ma ọ bụ ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ n'ihi na ugbu a mgbe ị na-ewere otu ọgwụ ọnụ iji kwụsị mkpụkọ ọbara.
Ọ bụ ụdị ihe dị mkpa ịkwesịrị ịnọgide na-ewere ya. O doro anya na ị gaghị akwụsị ị takingụ ya nanị n'ihi ọgwụgwọ ịchọ mma, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-afụ warfarin ị ka nwere ike injections n'ihi ya, echegbula onwe gị banyere ọbara ọgbụgba obere wee nwee ọrịa strok n'ihi nke a, ọ bụrụ na ị nwere ndụmọdụ ọ bụla m ekwuteghị m ka m mara na ngalaba nkọwa a n'okpuru. Regonna na - amalite ime obere njirimara na ngwụcha isiokwu ndị a na Wednesday ebe ị na - ajụ m ajụjụ ma ziga foto gị na - ekwu ma ọ bụrụ na m ga - eme nke a ma ọ bụ na oh ị maara ihe m na - atụ aro ma ọ bụ ihe yiri ya, ọ bụrụ ị chọrọ ịbụ akụkụ nke otu n'ime isiokwu na ịjụ m a ajụjụ dị ka na ị na-eche na ịbụ a obere toasted mgbe kpaliri m ga-amasị m na-anụ gị, mma ụmụ okorobịa na ọ bụ n'ihi na nke a izu m nwere olileanya na ị ụtọ ya ma gbaa ya ume, biko sonyere m ọzọ n'izu na-abịa ebe m ga-ekwu maka ya karịa ma m kwere nkwa na 100% ga-abịa n'izu na-abịa na isiokwu m na-eme maka ndị ọrụ nche na ọrụ ndị ọzọ, ọ ga - apụta, ọ ga - apụta naanị m akpogideghi ya n'uzọ niile, dịkwa mma yabụ aga m ahụ gị mgbe ahụ Tara
Gịnị kpatara ọnya m ji aza aza ma sie ike?
.B.ọnyana - eme mgbe capillaries mebiri emebi n'ihi mmerụ ahụ na ọbara na - abanye n'ime akwa akpụkpọ ahụ gị, na - akpata ụcha. Ahematomana-eme mgbe ọdọ mmiri na mkpụkọ n'okpuru anụ ahụ ma mepụta afụrụ akpụ akpụ.
Kedu mgbe m kwesịrị ichegbu onwe m banyere ọzịza mgbe mmerụ ahụ gasịrị?
Ọ bụrụ na gịọzịzana-adịghị ala ala, ma ọ bụ dị ogologo karịa izu 2-3, ịkwesịrịhụ dọkịta gị. Dọkịta gị ga-enwe ike ịkwado ọgwụ, mgbatị ma ọ bụ ọgwụgwọ iji dozie yaọzịza. Cheta,ọzịzabụ mmeghachi omume ahụ na ihemmerụ ahụ; ọ bụrụ naọzịzaka di, otua ka odimmerụ ahụ.
carb ịnyịnya ígwè ifelata
Ndi ọnya na-akawanye njọ ka ha na-agwọ?
Na-akụdana-ewe ọtụtụ agba dị ka ahụ na-arụ ọrụgwọọmmerụ ahụ. Ọbunkịtị maka aọnyaịgbanwe agba karịrị oge. Mmadu puru itu anya ihe ruru uzo ano na aọnyatupu ọ adapụ. Ọ bụrụ na aọnya na-emeagaghị agwụ,na-akawanye njọ, ma ọ bụ okwu ndị ọzọ soro ya, mmadụ kwesịrị ịkpọtụrụ dọkịta.
Kwesịrị ịhịa aka n'ahụ hematoma?
Imirikiti haematomas na-akawanye mma ngwa ngwa ma cheta izereịhịa aka n'ahụgaa ebe merụrụ gị ahụ. Fọdụ nwere ike iwe ogologo oge iji dozie nagịnwere ike na-eche dị ilu nke oge ụfọdụ. Mgbe awa 48 mbụ na mgbegịchere ka ọ gwọọ, jiri nwayọ na-emega ahụ ma na-agbatị ebe ahụ ogologo ogegịemela ihe mgbu.
Nwere ike igbapu hematoma n'ụlọ?
Ọ bụrụọbara na-agbanyeghị akaigbapu mmirisite nahematoma,igbapu mmirinke subungualhematoman'ozuzu anaghị achọrọ.Ị kwesịrịanwalaigbapu mmirisubungual gịhematoma n'ụlọdị ka ezighi eziigbapu mmirinwere ike ibute ọrịa ma ọ bụ mbibi na-adịgide adịgide nke ntu ntu.15.10.2020
Olee ọnya ndị i kwesịrị ichegbu onwe gị banyere ha?
Mgbe ị ga-achọ nlekọta ahụike
Kpọọ dọkịta ma ọ bụrụọnyana-adị mfe ma ọ bụ n’enweghị ihe kpatara ya. Kpọọ dọkịta ma ọ bụrụ naọnyana-egbu mgbu ma n'okpuru mbo ụkwụ ma ọ bụ mbọ aka. Kpọọ dọkịta ma ọ bụrụ naọnyana-emeọ bụghịmelite n'ime izu abụọ ma ọ bụ ghara ikpochapụ kpamkpam mgbe izu atọ ma ọ bụ anọ gasịrị.
Kedu ihe na-enyere ọzịza aka ịrị elu mgbe awa 48 gasịrị?
Tinye ice ma ọ bụ mkpọ oyi ozugbogbochiema ọ bụ belataọzịza. Tinye ice ma ọ bụ mkpọ oyi maka minit 10 ruo 20, 3 ma ọ bụ karịaogeotu ụbọchị.Mgbe 48Oru 72awa,ọzịzaagaala, tinye okpomọkụ na mpaghara na-afụ ụfụ. Ejila ice ma ọ bụ kpoo ọkụ ozugbo na akpụkpọ ahụ.
Enwere ọgwụgwọ ọ bụla dị iche iche maka ọnya na ọzịza?
E nwere ọtụtụ ọgwụgwọ dị iche iche iji belata ọzịza na ọnya. Witch hazel bụ ahịhịa ahịhịa ahịhịa nke nwere ike itinye ya n'ọrụ na anụ ahụ iji mee ka ọgwụgwọ ọnya na anụ ọkụ dị ngwa.
ọnụ ọgụgụ aka ịnyịnya ígwè
Kedu ihe m ga - eme iji belata ọnya mgbe ọdịda?
Arnica bụ ahịhịa na-eto na etiti Europe yana akụkụ nke North America. Nnyocha egosila na ọ nwere ike belata mgbu, ọzịza na ọnya na ejiri ya maka ebumnuche ndị a ọtụtụ narị afọ.
Kedu ka esi belata ọzịza na ọnya mgbe ịwachara ahụ?
Tụlee ịnara arnica montana ma ọ bụ bromelain: Gwa Dr. Mark Deuber ka ị chọpụta ma ịnara arnica montana ma ọ bụ bromelain kwesịrị ekwesị. A na-eche na ọgwụ ndị a ga-ebelata mmerụ ahụ na ọzịza. Activitymechi ọrụ: Orụbiga ọrụ ike n’ime izu ole na ole mbụ ịwa ahụ nwere ike imebi ọnya na ọzịza ma gbuo oge ịgwọ ọrịa.